Janaraal Cadde Muuse: "Wax badan ayaan ka hadlay kaabayaal dhaqaale iyo... waxaasi waa dhammaadeen, ma jirto.. cirka ayaan soo dumineynaa oo waxaas ayaan keeneynaa, wax aan idiin hayo ma leh...." Dhegeyso. Oct 31, 2007
Faalladii SomaliTalk.com | Nov 1, 2007
Gen. Cadde Muuse oo Arbacadii Oct 31, 2007 ka hadlayey kulankii 19aad ee golaha wakiilada Puntland oo ka furmay Garoowe ayaa qiray in uusan shacabka Puntland u hayn wax khayraad soo saarid ah. Isagoo arrintaas ka hadlaya waxa uu yiri: "Wax badan ayaan ka hadlay kaabayaal dhaqaale iyo... waxaasi waa dhammaadeen, ma jirto.. cirka ayaan soo dumineynaa oo waxaas ayaan keeneynaa, wax aan idiin hayo ma leh...." Dhegeyso.
Dadka siyaasadda Soomaaliya oddorosa waxay hadalka Gen. Cadde Muuse ku tilmaameen mid gogol dhig u ah in gebi ahaanba la baabi'yo heshiiskii Consort ltd iyo shirkadihii ka dambeeyey, loona gogol xaaro sidii loo soo celin lahaa shirkadahii heshiiska la galay dawladii hore ee Soomaaliya, sida conocophillips (Maraykan) iyo ENI-Agip (Yurub-talyaani), iwm.
Waxaa dadka siyaasada faaleeya ay intaas ku dareen in uu jiro qorshe ahaa in marka hore la baabi'iyo sharcigii batroolka ee la hor geeyey baarlamaanka si meesha looga saaro shirkadaha yaryar ee Kuwait Energy iyo Medco ee Indooniisiya ee uu watey Geeddi. Laguna xejiyo in meesha laga saaro shirkadaha ay Puntland la gashay heshiiska ee uu wato Gen. Cadde Muuse. Ugu dambayntana C/laahi Yuusuf lagu qanciyo in uu baab'iyo heshiiska Shiinaha. Markaasna la soo celiyo shirkadihii heshiiska la galay dalwaddii Soomaaliya ka hor burburkii.
Qorshaha oo sidaas ah ayaa la sheegay in Prof. Cali Maxamed Geeddi laga kari waayey in uu ka haro shirkadda Kuwait Enegry iyo Medco iyo sharciga batroolka ee shirkadahaasi u soo sameeyey Soomaaliya, taasina ay qayb ka noqotay in uu jagadiisii ra'iisul wasaare ku waayey.
Hadal haynta ugu badnay goobaha ay xogta isku dhaafsadaan dadka saamiyada ku leh Range Resources (Australia) ayaa ahaa maanta kuwo walaac weyn muujinayey. Mid ka mid ah ayaa yiri: "Saamiyadii Range waxay hoos ugu dhacayaan sida dhagax la tuuray oo kale". Qaar kale ayaa ku soo celceliyey hadalkii Gen. Cadde Muuse ee ahaa "Wax badan ayaan ka hadlay kaabayaal dhaqaale iyo... waxaasi waa dhammaadeen, ma jirto.. cirka ayaan soo dumineynaa oo waxaas ayaan keeneynaa, wax aan idiin hayo ma leh...." Dhegeyso.